Ayah waa 14-bilood jir u baahan dawo ku kacaysa 2 milyan oo doollar kahor inta aysan 2 sano gaarin + Sawirro (Xaalad Xanuun badan) | Hadalsame Media
Home Caafimaadka Ayah waa 14-bilood jir u baahan dawo ku kacaysa 2 milyan oo...
Ayah waa 14-bilood jir u baahan dawo ku kacaysa 2 milyan oo doollar kahor inta aysan 2 sano gaarin + Sawirro (Xaalad Xanuun badan)
(Bornholm) 01 Abriil 2021 – Bilihii yaraa ee ugu horreeyey Ayah Lundt waxay ahayd sawir u taagan fayaqab iyo fayoobi. Waxay dhalatay Jannaayo sanadkii tegey iyadoo ahayd 8.3 rodol. Markii ay 6 bilood jirtey waxay isku dayaysey cuntooyin cusub. Moos iyo broccoli shiidan ayaa dookheeda ahaa. Avocado-da se, sidaa kuma ahayn.
Yeelkeede, markii ay 9-bilood jirsatey ayay mar qura dib u guratay. Madaxa ma qaadi karto marka ay jiifto, ma fariisan karto mana xitaa sacbin karto, kuwaasoo ay horay u wada samayn jirtey. Shakiga ugu wayni se wuxuu yimid markii ay qamadi la ridqay qaaddo ku cuni waydey, taasoo ay iyadana horay u samayn jirtey.
Hooyada werwersan ee dhashay Mary Mithika, ayaa CNN telefoonka ugu sheegtay iyadoo ku sugan gurigeeda Bornholm, Denmark, in Ayah laga helay jirrada haleesha murqaha xangullaha ee Spinal Muscular Atrophy (SMA), oo ah cudur hidde sidka la xiriira oo haleela mid ka mid ah 10,000 oo carruur ah caalamka.
Ayah haatan waa 14 bilood jir qoyskeeduna waxay la hardamayaan waqtiga si ay u helaan lacag dhan $2 milyan oo doollar si loogu helo dawo hal mar ah oo ”nad badbaadin ah” kahor inta aanay 2 sano jirsanin.
Dawadan oo la yiraahdo Zolgensma, halkeedii kuuro, hadde waa kuuro, waxay joogtaa $2.1 milyan oo doollar tiiyoo aan xitaa la hubin inay ku dawoobayso, waana dawadan ugu qaalisan dunida oo dhan.
WAA MAXAY SMA?
SMA waa cudur isa soo tara oo ay keento hidde sidka oo ay wax ka khaldamaan, wuxuuna sababaa in ay dhintaan unugyada dareenka qaada taasoo dhalisa inay muruqyada baaba’aan, taasoo sii horseedaysa in uu ilmaha yari wax liqi waayo amaba xitaa neefsan waayo.
Marka ay xaaladda murquhu sii xumaato, waxaa ilmaha qaba SMA ay lasoo baxaan faro aan dhaqaaq lahayn iyo xangulle xoodan. Ma istaagi karaan, mana socon karaan kaalmo la’aan, intooda badanina cimri ahaan ma dhaafaan carruurnimada hore neefta oo ku dhegta darteed.
Hadaad doonayso waxaad ku caawin kartaa halkan GoFundMe.
Previous articleGolaha Amaanka oo kulan ka yeeshay Somalia & arrin uu carrabka ku adkeeyey
Next articleSomalia oo 4 khalad oo istaraatiji ah horay u gashay midka 5-aad ee ay haatan samayn karto maka soo waaqsan doontaa?